Caalamka Online » Maxaa ka Soo kordhay Xiisadoo ka dhex taagneed dalalka Sudan iyo Masar
Maxaa ka Soo kordhay Xiisadoo ka dhex taagneed dalalka Sudan iyo Masar
Xiriirka labada dal ee Masar iyo Sudan ayaa gaaray meel xun kadib markii dowlada Sudan ay u yeeratay safiirkeeda dalka Masar iyadoo ku tilmaantay dib u yeerista safiirka inay tahay wada tashi kaliya.
Dowlada Masar ayaa sheegtay inay qiimeyneyso go’aanka ay dowlada Sudan gaartay ayna jawaabta ku habboon ka bixin doonto.
Qaahira iyo Khartoum ayaa isku haya labo arrimood oo tan hore ay tahay lahaanshaha Halayeb oo ah dhul ku yaal xadka labada dal iyo dowlada Masar oo ku eedeysay dowlada Sudan inay la safatay wadanka Ethiopia khilaafka ka jira biyo-xireenka ay dowlada Ethiopia ka dhiseyso wabiga Nile.
Mar sii horaysay ayay dowlada itoobiya sheegatay in Masar aya ka dalbatay in heshiiska Sdex Geesoodka ah laga reebo Sudan sida uu qoray wargeyska ka soo baxa dalka Ethiopia ee Addis Fortune taas ayaan ka caraysiisay Dowlada uu hogaamiyo Albashiir.
waxaa kale oo la isla dhex marayaa in khilaafkaan Cusub uu ka danbeeyay Safarkii dhawaan uu Madaxwayne Erdogan ku tagay Magaalada khartuum heshiiska taariikhiga ahna kula saxiixday Madaxwaynaha Dalka Sudan.